चीनले कोरोनाको अनुसन्धान गर्न नदिएको डब्लूएचओको आरोप
बुधबार, २९ वैशाख, २०७८
९२ आरोहीले चुमे सगरमाथाको चुचुरो
नयाँ सरकार गठनमा कमजोर बन्दै काङ्ग्रेस
गण्डकीमा गुरुङकै सम्भावना
फुटको सङ्घारमा जसपा
रोनाल्डोसँग खेल्ने नेयमारको चाहना
कोरोना सङ्क्रमित एमालेका चर्चित नेता पशुपति चौलागाईंको निधन
सिटीले जित्यो प्रिमियर लिगको उपाधि
भारतमा सङ्क्रमितको मृत्युमा नयाँ रेकर्ड, एकै दिन चार हजार दुई सयको मृत्यु
लेभान्टेसँग बार्सिलोनाको बराबरी, उपाधि होडबाट बाहिरियो
विश्वमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या १६ करोड नाघ्यो
मुख्य पृष्ठविदेशचीनले कोरोनाको अनुसन्धान गर्न नदिएको डब्लूएचओको आरोप
बुधबार, २२ पुस, २०७७ 0प्रतिक्रिया
विराटनगर । विश्वभर महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका बारेमा अनुसन्धान गर्न चीन बाधक बनेको आरोप विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)ले लगाएको छ ।
डब्लूएचओले कोरोना कहाँबाट सुरुआत भएको हो भनेर चीनले अध्ययन गर्न नदिएको गुनासो गरेको हो । अनुसन्धानमा खटिएको विशेष टोलीलाई चीनले प्रवेश गर्न नदिएकोभन्दै उसले रोष प्रकट गरेको छ ।
समाचार एजेन्सी रोयटर्सका अनुसार डब्लूएचओको महानिर्देशक डा. टेड्रोस एडहनम गिब्रेयससले मंगलबार भनेका छन्, ‘हामीहररू निकै निराश छौं, कोरोनाको सुरुवात कहाँबाट भएको थियो भनेर अनुसन्धान गरिरहेको विशेषज्ञ टोलीलाई चीनले अहिलेसम्म आफ्नो देश प्रवेशमा अनुमति दिएको छैन।’
गत वर्ष डिसेम्बर अन्त्यमा चीनको वुहान सहरबाट कोरोना संक्रमण सुरु भएको मानिएको छ। तर वास्तविकता अझै प्रस्ट हुन नसकेकाले डब्लूएचओका वैज्ञानकिक अनुसन्धानमा जुटेका छन् । तर चीनले अनुसन्धानमा वाधा गरेको डब्लूएचओको आरोप छ । त्यसका लागि गत जनावरीमै डब्लूएचओले विशेषज्ञको टोली बनाएर वुहान जाने तयारी गरिरहेको थियो।
यसअघि चीनसँग मिलेर डब्लूएचओले कोरोनाका बारेमा अफवाह फैल्याइरहेको आरोप अमेरिकाले लगाएको थियो । अमेरिकाले कोरोनाका सम्बन्धमा डब्लूएचओको कुरा स्वीकार गर्न मानिरहेको थिएन ।
जनेभामा आयोजित अनलाइन पत्रकार सम्मेलनमा डब्लूएचओका महानिर्देशक डा. टेड्रोसले भने, चिनियाँ अधिकारीले अहिलेसम्म त्यहाँ (वुहान) पुग्ने टोलीलाई अनुमति नदिएको जानकारी आएको छ। त्यसका लागि चीनका वरिष्ठ अधिकारीलाई सम्पर्क गरी मैले यो कुरा डब्ल्यूएचओका लागि प्राथमिकतामा छ भनेर भनेको छु।’ डब्लूएचओले चीनले अनुसन्धान गर्न नदिएकोे भनेर निराशा व्यक्त गरेको छ ।
कोरोना चीन डब्लूएचओ
इरानमा एक लाखभन्दा बढी नर्सलाई कोरोना सङ्क्रमण, एक सय २० को मृत्यु
२० दिनको शिशु सङ्क्रमण जितेर घर फर्किएपछि